Delta dia namoaka lobby TSA Precheck vaovao natokana ho an'ny kitapo
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Delta dia namoaka lobby TSA Precheck vaovao natokana ho an'ny kitapo
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Delta dia namoaka lobby TSA Precheck vaovao natokana ho an'ny kitapo.
Ny traikefa vaovao azo amin'ny famantarana ny tarehy any Atlanta dia manome fahafaham-po tsy misy tànana sy fitaovana ho an'ireo mpandeha avy any amin'ny sisin-dalana mankany amin'ny vavahady.
Ny fandehanana amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Hartsfield-Jackson Atlanta dia ho mora kokoa ho an'ny mpanjifa Delta misoratra anarana amin'ny TSA PreCheck manomboka amin'ny volana ho avy.
Ny Delta Air Lines dia manokatra ny fidirana voalohany amin'ny Delta-TSA PreCheck Express sy ny fidinan'ny kitapo.
Ireo mpanjifa miaraka amin'ny fampiharana Fly Delta sy ny maha-mpikambana TSA PreCheck dia tsy ho ela dia ho afaka hitsidika toeram-pivarotan-kitapo vaovao natokana ho an'ny ambaratonga ambany amin'ny Terminal Domestic South Atlanta.
Delta Air-dalana, nanambara fa manomboka amin'ny volana ho avy, mandehandeha Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport dia ho mora kokoa ho an'ny mpanjifa Delta misoratra anarana ao amin'ny TSA PreCheck, miaraka amin'ny fanitarana ny fahaiza-manaon'ny tarehy vaovao sy ny fanokafana ny lobby Delta-TSA PreCheck express voalohany sy ny fitetezana kitapo.
Ireo mpanjifa miaraka amin'ny fampiharana Fly Delta sy ny mpikambana TSA PreCheck dia tsy ho ela dia ho afaka hitsidika lobby fanariana kitapo natokana ho an'ny ambany ambany amin'ny Terminal Domestic South an'i Atlanta, handalo ny toeram-pisavana ary hiondrana amin'ny fiaramanidina eo am-bavahady amin'ny fampiasana azy fotsiny. “Identité nomerika” (aron'ny laharan'ny Mpikambana ao amin'ny SkyMiles, laharan'ny pasipaoro ary Laharan'ny mpandeha fanta-daza). Ny mpanjifa dia afaka mandeha amin'ny lalana mankany amin'ny vavahady, tsy misy tanana sy fitaovana.
"Tianay ny hanome fotoana bebe kokoa ny mpanjifanay hankafy ny dia amin'ny alàlan'ny famoahana traikefa tsotra sy tsy misy dikany ary mahomby hatramin'ny farany," hoy i Byron Merritt, filoha lefitry ny Delta momba ny Brand Experience Design. “Delta Air-dalana, dia mpitarika amin'ny fitsapana sy ny fampiharana ny teknolojia famantarana ny tarehy nanomboka tamin'ny taona 2018 ho ampahany amin'ny vina ataonay amin'ny fananganana seranam-piaramanidina tsy misy ezaka. Ny fandefasana ny AtlantaNy lobby express sy ny fandatsahana kitapo no dingana farany amin'ny fanoloran-tenanay hihaino sy hanavao ny mpanjifanay.
Toy izao ny fomba hanamoran'ny traikefa vaovao an'i Delta ny fivezivezena amin'ny toera-pifandraisana telo amin'ny seranam-piaramanidina ao Atlanta: